Inona no azonao atao amin'ny Apple Watch raha tsy mifandray iPhone? Vaovao IPhone
Ny ankamaroan'ny maodelin'ny smartwatch dia manana fetra lehibe: tsy maintsy ampifandraisina amin'ny finday avo lenta mifanaraka amin'izany izy ireo mba hanatanterahana ny asany 100%. Ny Apple Watch dia tsy voavonjy amin'ity fahasahiranana ity, saingy na izany aza tsy marina ny milaza fa tsy maintsy mitondra ny iPhone miaraka amintsika foana isika, satria manana fizakan-tena manokana fa amin'ny toe-javatra manokana dia ilaina tokoa, toy ny rehefa te-hanao fanatanjahan-tena isika. Inona no azoko atao amin'ny Apple Watch raha tsy eo am-paosiko ny iPhone? Manazava izany aminao eto ambany izahay.
1 Mihaino mozika
2 Jereo ny sary tianao indrindra
4 Apple Pay sy Passbook
5 Ary ambonin'izany rehetra izany dia famantaranandro
Hatramin'ny 2GB ny mozika azo tehirizina mivantana ao amin'ny Apple Watch anao hihainoana tsy mila mandeha avy any amin'ny iPhone-nao, miaraka amin'ny fanampian'ny headphone na mpandahateny Bluetooth, mazava ho azy. Tsy fahaiza-manao goavana izany, fa mihoatra noho ny ampy hihainoana ireo hira tianao indrindra rehefa mandeha mihazakazaka na any amin'ny gym.
Jereo ny sary tianao indrindra
Ny sarinao dia ho azo zahana amin'ny Apple Watch ihany koa, na dia tsy ireo rehetra anananao amin'ny iPhone-nao aza, fa ireo izay voatahiry eo an-toerana amin'ny fiambenana avy amin'ny tranomboky iCloud, miaraka amin'ny totaliny 75MB, izay mety toa tsy dia be loatra, fa manana fanamarihana fa novaina habe mba hifanaraka amin'ny efijery Apple Watch, eny misy toerana ho an'ny vitsy tsara.
Mandritra ny fampihetseham-batana dia azonao atao ny mampiasa ny Apple Watch tsy miankina amin'ny iPhone. Hanisa ny anao tohatra, tohatra niakarana, fitepon'ny fony, ary naharitra hafiriana ianao no nipetraka, ary izany data izany dia hasiana fampifanarahana amin'ny app-nao iPhone vantany vao mifandray indray ianao. Ny tsy azonao atao dia ny manisa ny halaviran'ny dia na ny làlana naleha tamin'ny sari-tany, satria tsy manana GPS izany.
Apple Pay sy Passbook
Afaka mandoa vola amin'ny Apple Watch ianao nefa tsy mila mitondra ny iPhone miaraka aminao. Ireo karatra voalamina ao amin'ny iPhone dia voatahiry ao amin'ny Apple Watch ary Misaotra ny chip NFC azonao atao amin'ny fandefasana vola amin'ny terminal izay mifanaraka. Toy izany koa ny Passbook: ny tapakilan-tsarimihetsika ataonao, tapakilan'ny fiaramanidina na zavatra hafa voatahiry ao amin'ny Passbook dia azo ampiasaina amin'ny Apple Watch tsy misy ny iPhone eo akaiky eo.
Ary ambonin'izany rehetra izany dia famantaranandro
Tsy tokony hadinointsika ny Apple Watch ho famantaranandro, miaraka amin'ny asany rehetra: alarm, kronographi, daty, sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Inona no azonao atao amin'ny Apple Watch raha tsy mifandray iPhone?
Antonio Madrigal Barra dia hoy izy:
Valiny tamin'i Antonio Madrigal Barra
Lithium, tweak hanamboarana ny mari-pamantarana bateria an'ny iOS 8
Nomad dia manolotra dock sy charger portable ho an'ny Apple Watch